Ny lahatsoratr'i Suzi Tripp momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Suzi Tripp
Suzi Tripp dia nanatevin-daharana an'i Brooks Bell tamin'ny 2011, nanara-maso sy nitombo ny programa fanandramana ho an'ny lisitr'ireo orinasam-pandraharana manitatra. Amin'ny andraikiny amin'izao fotoana izao amin'ny maha VP of Insights azy, Suzi dia afaka manohy ny fitiavany hiteraka paikadim-pitsapana mahomby ary mamoaka ny fahitan'ny mpanjifa manan-danja hamahana olana ara-barotra sarotra.
Ahoana ny fahombiazan'ny programa tsy fivadihana mahomby amin'ny fandinihana ny fahitana sy ny toekarena amin'ny fitondran-tena
Zoma, Oktobra 1, 2021 Zoma, Oktobra 1, 2021 Suzi Tripp
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Douglas Karr avy amin'ny tafatafa Q&A niaraka tamin'i Suzi tamin'ny alàlan'ny mailaka. Ny programa tsy fivadihana dia manome marika miaraka amina fotoana iray hitazomana ireo mpanjifany efa lasa ary hivadika azy ireo ho mpankafy mikorontana. Raha atao famaritana, ny mpikambana mahatoky dia mahalala ny marikao, mandany vola aminao, ary manome anao angon-drakitra sarobidy mandritra izany. Ho an'ny fikambanana, ny programa momba ny tsy fivadihana dia fomba mety hanehoana hevitra manan-danja momba ny mpanjifa, ianaro izay